Burcadbadeeda Soomaaliya oo sii daysay markab ganacsi kadib hal asbuuc oo ay afduub u haysteen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandBurcadbadeeda Soomaaliya oo sii daysay markab ganacsi kadib hal asbuuc oo ay afduub u haysteen
Burcadbadeeda Soomaaliya oo sii daysay markab ganacsi kadib hal asbuuc oo ay afduub u haysteen
Burcadbadeeda Soomaaliya oo sii daysay markab ganacsi kadib hal asbuuc oo ay afduub u haysteen. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Burcadbadeeda Soomaaliya ayaa sii daysay markab ganacsi oo ay afduubteen horaantii asbuucaan, sida sarkaal katirsan ciidamada badda Puntland uu u xaqiijiyay warsidaha Puntland Mirror.
Mowliid Xasan oo katirsan ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa Puntland Mirror u sheegay in aysan jirin wax madaxfurasho ah oo la siiyay burcadbadeeda.
Sii daynta ayaa timid kadib wadaxaajood dhexmartay odayaasha dhaqanka iyo wakiilo katirsan burcadbadeeda, kuwaasoo Isniintii lasoo dhaafay qabsaday markabka saliida qaada, sida ilo-wareedyo ay u sheegeen warbaahinta.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, xubnihii burcadbadeeda ahayd ayaan la xirin balse waxaa la siiyay jid u ku baxaan markii ay markabka ka dageen.
Gelinkii hore ee manta oo Khamiis ahayd, ugu yaraan labo askari oo katirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay rasaas is-weydaarsadeen burcadbadeeda kuwaasoo markab ganacsi ku afduubtay xeebta degmada Caluula ee gobolka Bari.
Kani wuxuu ahaa weerarkii kowaad oo ay burcadbadeedu ku qaado markab ganacsi oo gooshayay xeebaha Soomaaliya in ka badan muddo shan sanno ah.
March 9, 2017 Ciidamo gadoodsan oo la wareegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo
May 10, 2018 Puntland oo 17 maxaabiis ah oo u dhashay Iran xabsi ka sii daysay